Zvikamu zve Discord. Zvakawanikwa neTechnical Advisory Council | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura zvaizivikanwa izvo nhengo mbiri dzeUniversity of Minnesota dzaive dzichiziva nemaune Linux kernel nematambudziko ekuchengetedza Ichi chaive chikamu chehurongwa hwekutsvaga husina kubvumirwa naLinus Torvalds kana Linux Foundation. Saka paakaziva zvavaiita, Greg Kroah-Hartman, musimudziri ane mukurumbira anotarisira kuchengetedza Linux kernel yebazi rakatsiga, vakaita nekurambidza kwete ivo chete, asi chero mushambadzi akabatana neMNN, kuti arambe achibatsira.
Pakarepo, iyo Linux Foundation Advisory Council, inoumbwa nevakagadziri vakuru, pamwe nevamwe vanozvipira vanobatsirana vevataridzirwa mutoro.uye vakatanga kuongorora kukuvara. Y vakatotaurirana mhedzisiro.
1 Zvikwangwani zvekusawirirana
1.1 Mhosva haibhadhare
Kubva pane yakazara 435 mipiro yakaitwa nenhengo yeyunivhesiti, zvakawanikwa kuti ruzhinji rwaive rwakanaka Pane vakasara, makumi matatu nemapfumbamwe vaive nezvikanganiso uye vaida kugadziriswa; 39 dzakange dzatogadziriswa, gumi nembiri dzakange dzisisashandiswe; 25 yakanga yaitwa boka rekutsvagisa risati ravapo uye imwe yakabviswa pakukumbira kwemunyori wayo.
Vaya vaitisa mipiro yakaipa vaishandisa mazita ekunyepa maviris, iyo inopesana nezvinodiwa zvakanyorwa zvekupa kodhi kuLinux kernel. Izvi hazvaigona kunge zvakaitwa pasina kudyidzana kwemasangano sezvo yunivhesiti ichi gamuchira 'Chitupa Chekuvandudza Chekutanga', chirevo chepamutemo nezve basa riri kuendeswa.
Kupesana nezvakataurwa nevatadzi, vaongorori, Qiushi Wu naAditya Pakki, uye chipangamazano wavo akapedza kudzidza, Kangjie Lu, purofesa mubatsiri muDhipatimendi reComputer Science neUinjiniya kuUMN, vakati, kubva kuAdvisory Committee svakaita nharo kuti zvese nemaune ngoro yekutumira zvigadziriso zvakagadziriswa, kana kufuratirwa, neLinux kernel vanogadzira uye vanochengeta. Mhedziso yaive yekuti zvirongwa zvekudzokorora zvakashanda nemazvo.
Zvechokwadi, kurambidzwa kweYunivhesiti yeMinnesota kunogona kunge kusingagumi. Zvese zviri pasi pesangano.
… Sarudza dziva revagadziri vepamba kuti vaongorore uye vape mhinduro pane zvakatsinhwa kernel shanduko shanduko idzi dzisati dzaburitswa pachena. Iyi hotfix inobata mabhugi akajeka uye kusunungura nharaunda yekudikanwa kwekuramba uchiyeuchidza vanogadzira mamwe maitiro epakutanga senge kutevedzera kumakodhi emazinga uye kuyedzwa kukuru kwechigamba. Izvi zvinoguma nehunhu hwepamusoro chigamba chinozosangana nematambudziko mashoma munharaunda yekernel.
Vatsvagiri havazobatsirike kubva pamhedzisiro yekuferefeta kwavo. Pepa ravainge vataurira kumusangano wekuchengetedza rakanga ratambirwa. Asi, ndinofungidzira kuti pasi pekumanikidzwa kwenharaunda zvakabviswa nevanyori pachavo vakaita nharo:
Chekutanga pane zvese, isu takakanganisa nekusabatana mukubatana pamwe neLinux kernel nharaunda tisati taita kudzidza kwedu. Isu tava kunzwisisa kuti zvaive zvisina kukodzera uye zvichikuvadza nharaunda kuti iite chidzidzo chedu uye nekuparadza kwavo kuyedza izvi zvigamba pasina zivo yavo kana mvumo. Panzvimbo iyoyo, isu ikozvino taona kuti nzira kwayo yekuita iri rudzi rwebasa ndeyekuita pamwe nevatungamiriri venharaunda pamberi kuitira kuti vazive nezve basa, vabvumire zvinangwa zvaro uye nzira, uye vanogona kutsigira nzira uye mhedzisiro kana basa racho yakapera uye yakaburitswa. Naizvozvo, tiri kubvisa gwaro kuitira kuti isu tirege kubatsirwa kubva pachidzidzo chisina kuitwa nenzira kwayo.
Chechipiri, takapihwa kutadza munzira dzedu, hatidi kuti basa iri rimire semuenzaniso kuti tsvagiridzo inogona kuitwa sei munharaunda ino. Asi, tinotarisira kuti chiitiko ichi chichava nguva yekudzidza yenharaunda yedu, uye kuti hurukuro inokurudzirwa pamwe nemazano zvinokwanisa kushanda segwara rekuferefeta kwakanaka mune ramangwana.
Kana zvinoita sekunge kutsvagisa kwakanaka kwazvo. Yunivhesiti yeMinnesota, mukuyedza kupindura chikumbiro cheLinux Foundation yemishumo,handina kuwana kuti chigamba chekutumira kwekugadzira maitiro hachina kunyorwa kwazvo.
Dai ndaive nemwana, handaimutumira kunodzidza kuUM
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zvikwata zve Discord. Zvakawanikwa neTechnical Advisory Council